I-Linux Mint 20 iya kuphucula inkxaso ye-Snaps, emva kwezikhalazo | Ubunlog
IPablinux | | Linux mint, Ubuntu
Njengenyanga nganye, uClement Lefebvre upapashe ukungena kwibhlog yakhe esixelela ngenkqubela phambili yenguqulo elandelayo yenkqubo yokusebenza ayiphuhlisayo ngoku. Linux i-20, ezakusebenzisa i-Ulyana njengegama lekhowudi, iya kusekelwa kwi-Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa, kodwa ayizukuxhomekeka kakhulu kwiiphakheji ze-Snap njengokukhutshwa ngokusemthethweni kweCanonical. Ngapha koko, njengoko kuchaziwe isithuba esivela kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo, ULefebvre kunye neqela lakhe basebenzela ukunciphisa ukufikelela kwi-snapd.
Ngokuyinxenye, bakwenza oku ngenxa yezikhalazo zasekuhlaleni. Njengabasebenzisi abaninzi, kunye nabanye abaphuhlisi, u-Lefebvre akayithandanga intshukumo yentshutshiso yangoku ye-Canonical apho bafake khona Ivenkile ye-Snap ebhala ngaphezulu icandelo lesiseko sephakheji ye-APT, ke kuye kwafuneka bayeke le nto, enokuthetha ukuba iChromium, isikhangeli esele sihanjisiwe njengoSnap, iyeka ukuhlaziya.
I-Linux Mint 20 ibhengeza imfazwe kwi-snapd
[…] Njengoko ufaka uhlaziyo lwe-APT, i-Snap iba yimfuneko yokuba uqhubeke usebenzisa iChromium kwaye ifaka ngasemva kwakho. Oku kwaphula enye yeenkxalabo eziphambili ezazinabantu abaninzi xa kwakubhengezwa i-Snap kunye nesithembiso esivela kubaphuhlisi bayo ukuba asinakuze sithathe indawo ye-APT.
Ivenkile yokuzifaka ngokwakho ebhala ngaphezulu kwenxalenye yesiseko seephakeji ze-APT ngu-NO Hayi. Yinto ekufuneka siyimisile kwaye inokupela ukuphela kohlaziyo lweChromium kunye nokufikelela kwiVenkile yeSnap kwiLinux Mint.
Ngokwam, ndicinga ukuba esi sibhengezo semfazwe ngokuchasene nomgaqo-nkqubo weCanonical siqinisekile. I-Linux Mint mhlawumbi yile Eyona ndawo idumileyo yokuhanjiswa kwe-Ubuntu esekwe ngokungekho semthethweni Umhlaba kwaye, xa iLinux Mint 20 isemthethweni, iCanonical inokutyala iindlebe zayo kwaye iyeke ukuba nguzwilakhe njengoko bekukho kwizavenge zamva nje zenkqubo yayo yokusebenza. Ukuphupha simahla. Kwaye usebenzise enye incasa ye-Ubuntu, okanye nolunye usasazo, nayo.
Ngokubhekisele kwezinye iindaba ozikhankanyileyo kule nyanga, sine Inkxaso ephuculweyo yeNVIDIA Optimus, Inkxaso yeenkqubo zokubeka esweni izinto ezininzi iyaphuculwa, utshintsho lombala baya kuba nobulumko ngakumbi, ukuphuculwa kwendlela yetreyi kunye nokuphuculwa kweCinnamon, indawo yemizobo eyenza iLinux Mint ithandwe.
I-Linux iMint 20 Ulyana izakufika ngamanye amaxesha ngoJuni, ngaphandle komhla ocwangcisiweyo, kwaye iyakwenza njalo ngeendaba ezivela kwiFocal Fossa, ezinje ngeLinux 5.4. Iya kuqhubeka nokunikezelwa kumahlelo amathathu apho ibikhona ixesha elide, eyiCinnamon, iMATE kunye neXfce, zonke zikwiinguqulelo ezingama-64 kuphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ulwabiwo olusekwe kubuntu » Linux mint » I-Linux Mint 20 iya kuphucula ukuzikhusela kwakho kwi-Snaps, into uluntu olukhalaze ngayo
Kubonakala kum ukuba iCannonical, ekusebenzisaneni neMicrosoft kakhulu, yosulelekile zizenzo zabo ezimbi.
Hayi, endaweni yoko kukulandela imigaqo yokutsala abasebenzisi abaninzi, njengoko iTorvlads ihlala isitsho, MISA UMGANGATHO WOKUFAKA.
Okanye uya kuthi utata weLinux naye wosulelwe zizenzo ezimbi?
ULuciano Panigo sitsho
Njengoko i-MS yathandana no-Ubuntu kakhulu (nditsho nokuyivelisa nge-WSL), ayizothusa into yokuba bayithengile.
Phendula uLuciano Panigo
UArmando Mendoza sitsho
Ilungele iLinux MInt kunye nomphuhlisi wayo, ndininqwenelela impumelelo
Ndiza kuqhubeka nokusebenzisa i-debian iminyaka eliqela
Phendula u-Armando Mendoza
I-LInux MInt iphuculwe ubuntu kwaye yagqitywa, yenye yezona ndawo zibalaseleyo zedesktop, zombini ngokuqonda nangokusebenziseka. Nangona uNemo eye wanamathela kancinci xa sele ejikeleze naye ixesha elithile. Kodwa ngayo yonke enye into ilishumi.
UFernando Bautista sitsho
Hayi, Ubuntu buyancipha, kunokuba iLinux Mint kufuneka ihambe kube kanye kunye neDebian kwaye iyeke ukuthatha ithuba lesiseko seBuntu.
igurmersindo minio ebonakalayo sitsho
Ungathethi inkunzi yenkomo hamba. kwaye usebenzise ii-distros ngentlonipho.
Phendula i-gurmersindo minio ebonakalayo
Ndiyakholelwa ngokunyanisekileyo ukuba oku ukwenza ngaphandle kwe-Snap ngokobuqu, ewe, ukuhlonipha ezinye izimvo, andikhathali nokuba bayayisusa. Ndihlala ndikhetha iiphakheji zetyala kunye ne-APT.
Uzinzo, ubumdaka, ukungqinelana nendawo yemizobo yedesktop… Amava endinawo ngoSnap ukuza kuthi ga ngoku ayinyani.
Ngaba iyabothusa abasebenzisi okanye itsale abasebenzisi abaninzi?
Yintoni ingxaki emva koko?
Akufanele silibale ngeprojekthi ye-LMDE. Ndicinga ukuba kungekudala uBuntu uza kuba yinxalenye ye-MS kwaye kuyakufuneka ukuba usekwe iprojekthi yeMint kwenye i-distro, njengoko ezi ntlobo zeengxaki ziya kuya zisenzeka rhoqo
olo luloyiko endinalo. Ndiyathemba ukuba ndiphosakele kodwa okungakumbi kukuskena iLinux ngokubanzi.
Foliate 2.2.0, olunye uhlaziyo ngakumbi kulo mfundi we-eBook
I-Linux 5.7 iza nazo zonke iintlobo zotshintsho ezibandakanya nokuphuculwa kokusebenza